Santa Marta • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Santa Marta dia tanàna any Kolombia. Io no renivohitry ny Departemantan'ny Magdalena ary tanàna an-tanàn-dehibe lehibe indrindra fahefatra amin'ny faritra Karaiba any Colombia, aorian'ny Barranquilla, Cartagena, ary Soledad. Niorina tamin'ny 29 Jolay 1525, avy amin'ny mpandresy Espaniola Rodrigo de Bastidas, izy no tanàna Espaniôla voalohany nipetraka tao Colombia, tanàna tranainy indrindra ary Amerika faharoa no zokiny indrindra. Ity tanàna ity dia miorina eo amin'ny helodrano mitovy anarana ary tahaka izany, izy io dia toerana fizahan-tany voalohany any amin'ny faritr'i Karaiba.
Sandam-bola Colombian peso